Nispakhya National Weekly ( निस्पक्ष राष्ट्रिय साप्ताहिक ) online News Paper: वैद्य कथमकदाचित चुनावमा जान तयार भएको खण्डमा चुनाव नै नहुने परिस्थिति सृजना गर्ने सम्मको योजना प्रचण्डको छ !
वैद्य कथमकदाचित चुनावमा जान तयार भएको खण्डमा चुनाव नै नहुने परिस्थिति सृजना गर्ने सम्मको योजना प्रचण्डको छ !
एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेकपा–माओवादीलाई चुनावमा सहभागी गराउन अनिच्छा देखाएका छन् । मंगलबार नयाँ वानेश्वरमा भएको असन्तुष्ट दलहरुसँगको वार्ताका क्रममा प्रचण्डले उनीहरुका माग पूरा गर्न नसकिने भन्दै यथास्थितिमै चुनावमा सहभागी हुनुपर्ने बताएका हुन् । त्यस लगत्तै पोखरा पुगेका प्रचण्डले माओवादी नेतृत्वको मोर्चाले अघि सारेका माग सम्बोधन गर्न नसकिने
दोहो¥याए । “वार्ता नाटक जस्तो लाग्छ, मलाई लाग्दैन किरणजीहरु चुनावमा आउनुहुन्छ” उनले पोखरामा पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै भने, “उहाँहरु चुनावमा नआउनका लागि पूरा गर्न सकिने खालका माग राख्नुभएको छ ।” स्रोतका अनुसार प्रचण्ड वैद्य नेतृत्वको माओवादीलाई चुनावमा सहभागी गराउँदा आफ्नो पार्टीलाई नोक्सान हुने निष्कर्षमा पुगेका छन् । प्रचण्ड असन्तुष्ट नै रहेका उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल र अशोक राई नेतृत्वको संघीय समाजवादी पार्टीले राखेका मागमा भने सकारात्मक छन् ।“आफूबाट विभाजित भएको पार्टी चुनावमा जाँदा मत बाँडिने भएकोले प्रचण्ड वैद्यलाई चुनावमा सहभागी गराउन चाहन्नन्” एमालेका एक नेताले भने, “वार्तामा बस्ने तर माग पूरा नगरेपछि जनताको अगाडि वैद्यले नै चुनाव नचाहेको सन्देश जान सक्ने भन्दै प्रचण्डले वार्तामा भने केही समय बिताउँने छन् ।”
पटक–पटक चुनावमा सहकार्यका लागि वैद्य माओवादीसँग प्रयास सफल हुने नदेखेपछि प्रचण्ड उनीहरु बिना पनि निर्वाचनमा जानुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् । प्रचण्डका निकटस्थहरुका अनुसार वैद्यलाई चुनाव नलिई जाँदा चुनावपछि मूलधारको राजनीतिमा नेकपा–माओवादीको प्रभाव कम हुने र आफूसँगै मिल्नुको विकल्प नहुने भएकोले उनी वैद्य बिना चुनावमा जान चाहन्छन् ।
स्रोतका अनुसार वैद्य कथमकदाचित चुनावमा जान तयार भएको खण्डमा चुनाव नै नहुने परिस्थिति सृजना गर्ने सम्मको योजना प्रचण्डको छ । यहीकारण पनि जारी वार्ताको प्रक्रिया सफल हुने छाँट नदेखिएको कांग्रेस–एमालेको बुझाई छ । “दुई माओवादीको तालमेल हुने अवस्था नभएसम्म चुनावका लागि सार्थक वार्ता हुने अवस्था छैन” ती एमाले नेताले भने ।
नेकपा एमालेका महासचिव इश्वर पोखरेलले पनि प्रचण्डका पछिल्ला क्रियाकलाप शंकास्पद रहेको बताए । “प्रचण्ड चुनावमा वैद्यलाई नलैजाने मनसाय जस्तो पनि देखिन्छ” पोखरेलले भने ।
यसअघि नेकपा–माओवादीका सचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले पनि चार दलले आफूहरुलाई चुनावमा लैजान नचाहेको बताएका थिए । माओवादी कै एक जना नेताले भने “प्रचण्डले चुनाव चाहेका थिए भने पहिले नै वार्ताको लागि आग्रह गर्थे, पत्र पठाउन ढिलाई गर्नु पनि समय किल गर्ने एउटा हत्कण्डाको रुपमा प्रयोग गरेका छन् ।”
तर एमाओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले एमाओवादी चुनावका लागि प्रतिबद्ध रहेको बताए । “चुनाव त तोकिएकै मितिमा गर्ने भन्ने नै छ” उनले भने, “बरु असन्तुष्टको मागले अल्लि अफ्ठेरो पार्ने देखिएको छ ।”
वैद्य नेतृत्वको मोर्चाको माग पूरा नहुने बताएका प्रचण्ड उपेन्द्र यादव र अशोक राई नेतृत्वको मोर्चाले राखेको समानुपातिक तर्फको सिट संख्या बढाउने माग पूरा गर्न तयार देखिएका छन् । तर एमाले–कांग्रेसले भने वैद्य नेतृत्वको माओवादी चुनावमा सहभागी हुने पक्का भएमात्र समानुपातिक सिट बढाउनुपर्ने पक्षमा छन् । प्रचण्ड भने वैद्य बाहेक लागि मात्र भएपनि बढाउनुपर्ने तर्क गरेका छन् ।
वैद्य नेतृत्वको माओवादी चुनावमा आए आफुहरुलाई फाइदा हुने देखेकाले एमाले–कांग्रेस अन्य मोर्चाका लागि मात्र समानुपातिक सिट संख्या बढाउन तयार नदेखिएका हुन् । वार्ता पछि मधेसी जनाधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष यादवले आफ्नो मागमा एमाओवादी र मधेसी मोर्चा सकारात्मक देखिएका भएपनि कांग्रेस र एमालेले अस्वीकार गरेको बताएका थिए ।
वार्तामा सहभागी एमाले नेता रघुजी पन्तले माओवादी पनि चुनावमा सहभागी हुने निश्चित भए आफुहरु त्यसका लागि तयार रहेको बताए । “यादवजीहरुले भन्दैमा समानुपातिकको सिट बढ्दैन” उनले भने, “सबै दल सहभागी हुने वातावरण बनेमा त्यसका लागि हामी तयार छौ ।” - ओएनएस